Isku soo wada duuboo Xujo waa halxiraal oo laga helo leyliga oo dhameystiraya | Androidsis
Raadi foornada dhameystiran ee aad ku darsato boqolaal ka mid ah Ciyaaraha caadiga ah ee 'Gather Match'
Kulan Gather waa xujo cusub oo midabo leh iyo in ay tahay mid ka mid ah kuwa nasashada badan maadaama aan isku daraynno qaybaha ka maqan mid ka mid ah qaybaha. Ciyaar aad u eg Tetris ugu yaraan xagga aragtida muuqaalka ah iyo tan leh 3D-keeda ayaa awood u leh inay soo saarto waayo-aragnimo ciyaar wanaagsan.
Un cinwaan cusub oo loogu talagalay Android oo wali leh dib u eegisyo yar, laakiin waa hubaal in inyar oo yar oo ciyaartoy ah lagu dari doono qaabkiisa wanaagsan ee uu ku fahmayo xujo. Maaha inuu isagu ikhtiraacay shaagagga, laakiin wuxuu siinayaa aragti xiiso leh in leysku daro darbiyada ama baloogyada siyaabo kala duwan. U tag.
1 Isku dar qaybaha kala duwan ee isku imaatinka 'Gather Match'
2 Markay fudeydku awood badan yahay
3 Jaanis bilaash ah oo leh 30-seken ilbiriqsi
Isku dar qaybaha kala duwan ee isku imaatinka 'Gather Match'
Kulan Gather waa xujo cusub oo loogu talagalay Android taas oo ah inaan ku riixno mid ka mid ah foornada bidix si aad uhesho midka dhameystiraya. Waxaan leenahay labo isku day oo aan ku xallin karno mid kasta oo kaararka ah ee aan ku qasbanaaneyno inaan ku buuxino dhammaan kuwa ay na saareen.
Iyo runta, waxa noqon kara wax iska fudud, waxay noqotaa hiwaayad la isku daro tirooyinka oo laga helo dhammaystirkooda. A Ciyaar 3D ah oo aan xitaa ku ogaanay waxoogaa dib u dhac ah, laakiin taasi ma qarinayso khibrada guud ee ciyaartan cusub ee Android.
Markaan horumarayno waxaan yeelan doonaa tabs badan oo shaashadda ah iyo xitaa matalaad muuqaal ah dhammaan noocyada astaamaha ee ay tahay inaan ku samaysano qaybaha aan nidaamsanayn. Waa wax hiwaayad u ah kuwa jecel si aan u horumarinno una dhammeyno dhammaan heerarka.
Markay fudeydku awood badan yahay
Suuqa adag ee ciyaaraha aan caadiga ahayn ama xujooyinka, ma fududa in la istaago oo wax ka badan bilowga lagu ciyaaro ciyaartaada oo lagu bilaabay Play Store; qaasatan maxaa yeelay maalmo gudahood ama usbuucyo gudahood ayaa clones ay ka muuqan doontaa meel walba si ay ugu daydaan makaanikadaada iyo marka isku day inaad xoqdo saamigaas suuqa ee aad leedahay (Ha u sheegaan BOQORKA iyo cidda uu ku dayday).
Taasi waa sababta Kulan Gather waa ciyaar fudud laakiin awood badan taas oo leh waayo-aragnimadaas fudud ee ah inaad dhinac iska dhigto qaybaha ka maqan kaabiddooda dhinaca kale, waxay noqoneysaa khibrad ciyaar oo dhan.
Waa sidaas waxa ugu fiican weli lama imaan doono heerarkaas Qaybaha jajabka ah ee dhammaan qaababka ayaa bilaaba inay buuxiyaan shaashadda waxayna awood u leeyihiin inay sawiraan qalbi ama noocyo kale oo calaamado ah.
Jaanis bilaash ah oo leh 30-seken ilbiriqsi
Oh, oo waa lagugula talinayaa taas dhawr heer ka dib waxaad u liqaysaa "macno ahaan" 30 ilbidhiqsi ah. Ma ahan xitaa shan ka mid ah kuwa aad xiri karto, laakiin way dhammaystiran yihiin. Uguyaraan, hada, iyo tas-hiilaad kooban, ma aragno mid kale oo dhowr heerar ah oo lasoo dhaafay, sidaa darteed waafiican tahay hada.
Muuqaal leh dhammaan midabyadeeda iyo qaybahaas 3D Waa halka uu ku guuleysto ciyaartan loo yaqaan 'Gather Match' iyo in aan ku heli karno bilaash. Ma lahan waxyaabo dheeraad ah ama shaashad ama wax nooc ah, kaliya heerarka si aan ugu aadno midka ku xiga ama aan dib ugu billowno haddii aan ka gudubnay labadii isku day ee dhicisoobay.
Isku Aruurinta Isku-uruurinta waxaa lagu heli karaa bilaash oo leh xayeysiisyo ka socda Dukaanka Play sida mid aan caadi ahayn oo ka mid ah kuwa aad bilowdo oo ha joojin ciyaarta illaa aad ka dhammayso. Markaad dhamayso dib ugu noqo tetris.
Xujo yar oo aan caadi ahayn oo ka mid ah kuwa degdega ah ee naga dhigaysa mid ku faraxsan hiwaayadda ay yihiin.
Madadaalo si aad uhesho
Marka ay jiraan qaybo badan oo shaashadda ah
Waxay noqon kartaa mid caajis ah mar uun
Developer: Ciyaaraha Tatem Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Raadi foornada dhameystiran ee aad ku darsato boqolaal ka mid ah Ciyaaraha caadiga ah ee 'Gather Match'
Samsung waxay ku shaqeyn kartaa muraayadaha indhaha ee cajiibka ah
Samsung ayaa bilaabi doonta nooca Lite ee Galaxy Tab S7